Krizy Covid-19: efa manakaiky ny 4 200 Ar ny 1 euro | NewsMada
Krizy Covid-19: efa manakaiky ny 4 200 Ar ny 1 euro
Mihen-danja ny sandan’ny Ariary miohatra amin’ny vola vahiny, amin’izao krizy toekarena ateraky ny tranga Covid-19 izao. Omaly alakamisy, misanda 4 167 Ariary ny 1 euro, ary 3 787 Ariary ny 1 dolara. Efa nahatratra 4 158 Ar ny 1 euro ny 22 mey teo ary tafakatra 3 233 Ar ny 1 dolara ny 18 mey. Sandany ambony indrindra ireo tamin’ity taona 2020 sy ny volana mey 2020 ity.
Taratry ny krizy toekarena ny haratsian’ny sandambola malagasy. Avoaka ny vola vahiny, ilaina amin’ny fividianana, ny fanafarana entana any ivelany ny vola vahiny. Tambiny, mampidi-bola vahiny ny fanondranana entana mankany ivelany, sy ny fahatongavan’ny vahiny eto amintsika, ny mpizahatany, mitondra vola vahiny, atakalo eto an-toerana.
Samy voa mafy avokoa anefa ireo lafiny roa ireo satria maro ny orinasa tsy misokatra any ivelany, mamokatra ireo akora ilaintsika. Tsy tonga koa ny mpizahatany satria mihiboka daholo ny firenena rehetra, sady tsy misokatra ny fitaterana ana habakabaka.
Hihamafy ny krizy aorian’ny Covid-19
Nambaran’ny mpahay toekarena iraisam-pirenena, sy ny Banky iraisam-pirenena, fa mbola hihamafy ny krizy aorian’ny fihibohana sy ny krizy Covid-19, indrindra aty amin’ny firenena an-dalam-pandrosoana. Eto Madagasikara, efa maro ny orinasa nitsahatra tsy afaka miasa, indrindra ny fizahantany, ny fiantranoana, ny fitaterana, ny orinasa afakaba, sns.
Etsy ankilany, nitsahatra ny fanampiana vatsy tsinjo any amin’ny faritra maro, niato koa ny tsena mora, mivarotra amin’ny vidiny mora ny sakafo ilaina andavanandro. Mbola mitohy kosa ny tosika Fameno, vola 100 000 Ar, avy amin’ny Fid, notohanan’ny Banky Iraisam-pirenena.